Ciidanka NISA oo gacanta ku dhigay haweeney uu qabo sarkaal ka tirsan Al-shabaab (SAWIR) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka NISA oo gacanta ku dhigay haweeney uu qabo sarkaal ka tirsan Al-shabaab (SAWIR)
Ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa maanta degmada C/casiis ee magaalada Muqdisho ku qabtay haweeney la sheegay inuu qabay sarkaal ajanabi ah oo ka tirsan saraakiisha sare ee Xarakada Al-shabaab.
Haweeneydaan oo magaceeda lagu sheegay Leyla Cumar Baaruud ayaa la sheegayaa in ciidanka nabad-sugidda ay muddo 5 bilood ah ku daba-joogeen, waxaana haatan su’aalo lagu weydiinayaa xarunta NISA.
Warar hordhac ah oo ay warbaahinta Bulshoweyn heleeyso ayaa sheegaya in haweeneydaan ay kusii socotay seygeeda ku sugnaa degmada Jilib ee gobolka J/dhexe, halkaasi oo uu ku sugan yahay seygeeda qabay.
Haweeneydaan ayaa la sheegayaa in ninka sarkaalka qabo uu dhalasho ahaan uu kasoo jeeda dalka Itoobiya.
Dhinaca kale, haweeneydaan ayaa la sheegayaa in kooxda Al-shabaab ay u qaabilsaneyd tashkiilinta iyo marin habaabinta caruurta yar, iyadoo dugsi xifdinta qur’aanka kariimka ah lagu barto ku laheyd gobolka J/hoose.
Illaa iyo haatan ma jiro wax war ah kasoo baxay saraakiisha ciidanka nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka, kaas oo ay kaga hadlayaan xariga haweeneydaan iyo waxa laga yeeli doonno.
Inta badan ajaaniibta ka dhinac dagaalanta dagaalyahanada Al-shabaab ayaa la sheegaa inay si qasab ah ku guursadaan dumarka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay ka arrimiyaan.